ओलीलाई राजपा नेता शरदसिंह भण्डारीले दिए मुखभरिको जवाफ, हेर्नुहोस के-के भने — Imandarmedia.com
ओलीलाई राजपा नेता शरदसिंह भण्डारीले दिए मुखभरिको जवाफ, हेर्नुहोस के-के भने
काठमाडौं । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक तथा नयाँ बनेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरदसिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा व्यंग्यसहित धन्यवाद दिएका छन्।
बिहीबार बिहान कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोग कार्यालयमा दल दर्ता गर्न पुगेका भण्डारीले पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउने भनेर अध्यादेश ल्याएकोमा आफूहरू जुटेको बताए।
‘उहाँले पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो। हामी जुट्यौं,’ भण्डारीले भने,‘धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू।’ तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दर्ता भइसकेको छ।
यता पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल, नेकपा सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले जनकपुरबाट रातारात काठमाडौं ल्याएका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले राजपा र समाजवादी पार्टी एक भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । मधेसका जनताको मुद्दा उठाउँदै आएका पार्टीहरु एक हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो सपना पूरा भएको भन्दै यादवले खुशी प्रकट गरेका हुन् ।
पार्टी एकीकरण भई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेपछि सांसद यादवले भने, ‘मेरो सपना थियो, त्यो साकार भएको छ, आजको दिनमा तीनवटा पार्टीहरु एक हुनु योभन्दा राम्रो मेरा लागि अरु के होला र ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेट्न खोज्नुभएको छ भन्दै झुक्याएर गलत मनसायले जनकपुरबाट राति ३ बजे काठमाडौं ल्याइएका सांसदले नेकपाको कब्जाबाट फुत्केपछि मिडियालाई दिएको राजनीतिक प्रतिक्रिया यस्तो छ-
यो जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पनि पार्टीभित्रै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ । यो किन ल्याउनु भो ? समाजवादी फुटाउन । तर, समाजवादी फुट्ने अवस्था देखिएन । यसमा मलाई पक्कै पनि टार्गेट गरिएको हो । त्यसअनुसार दुईजना नेकपाका माननीय महेश र किसनजी खबर नदिइकन पुग्नुभयो । आइजीपी साहेब (सर्वेन्द्र खनाल) सँग मेरो पहिल्यै देखिको चिनाजानी हो । एमपीसाबहरुसँग पुरानै चिनाजानी । उहाँहरुले खासै कुनै नराम्रो व्यवहार मसँग गर्नुभएको छैन । तर, एकचोटि प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्नैपर्‍यो भन्ने किसिमको दबाव आयो ।
लकडाउनका बेलामा मेरो काठमाडौं आउने विचार थिएन । आउँदा आउँदै ढीला भयो । राति तीन बजिहाल्यो । उहाँहरुको मनसाय बुझेपछि बिहान मर्निङवाक गर्दै बाहिर निस्किएँ । मर्निङवाक गर्दै अध्यक्षजीकहाँ पुगिहालें ।
मेरो सपना थियो, त्यो आज साकार भएको छ । तीनवटा एउटै विचारधारका पार्टीहरु थिए । मैले नयाँ शक्तिबाट सुरु गरें । अर्को त्यस्तै विचारधाराको संघीय समाजवादी पार्टी थियो । त्यस्तै मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने बलियो पार्टी राजपा थियो । नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादीको मिलन हुँदा दुबै पार्टीमा म आफैं बसेको हुँ । अहिले म जसरी सांसद भएको छु, राजपा र फोरमको एकताले भएको हुँ ।
यस्तो अवस्थामा सधैंका लागि हेर्ने हो भने जति पनि पिछडिएको समुदाय र संविधान संवोधन नभएका कुराहरु आजको दिनमा उठाउने हो भने अहिले दुबै पार्टीहरु एक हुनु योभन्दा राम्रो मेरा लागि अरु के होला र ।
मेरो ग्रुपमा कोही पनि थिएन । यस्तो कुरा हो भन्ने थाहा पाएको भए म काठमाडौं आउने नै थिइनँ । मैले पार्टीमा विद्रोह गर्ने कुरै थिएन । मैले त जे चाहेको थिएँ, त्यो अहिले पूरा भएको छ । मैले असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन । राज्यमन्त्री बनेँ, सांसदको टिकट पाएँ । मैले असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै ठाउँ नै छैन ।
मेरातर्फबाट यस्तो काम जिन्दगीमा हुँदैन । किनभने, म अहिले पनि पेशाले डाक्टर मान्छे हुँ । खासगरिकन मधेसको मुद्दाबाट म उठेको हुँ । मेरो पृष्ठभूमि तपाईहरु राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ । म पार्टीमा पहिले पनि थिएँ, अहिले पनि उहाँहरुसँगै छु ।
कहीँ न कहीँबाट पार्टीभित्र यस्ता असन्तुष्टिका कुराहरु आएको पक्कै पनि हो । नआएको होइन । तर, हामी अलग्गै जाँदैछौं भनेर मलाई कसैले एप्रोच गरेको छैन ।
मेरो प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाजीसँग पनि कुराकानी भयो । उहाँ पनि अलिकति असन्तुष्ट पक्कै पनि हुनुहुन्छ । तर, यो पार्टी तोड्न लागेको मैले खासै देखिनँ ।
पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा विहीबार कार्यबाहक अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीवीच अध्यादेशबारे छलफल भएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले नेताहरुको मागवमोजिम तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक राख्न र विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए । यस्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् ।
दुबै नेताको दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्रीले कानूनविदहरुसँग परामर्श गर्ने र अध्यादेश फिर्ता लिने बताएको स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै अध्यादेश खारेज गर्ने सम्भावना छ। संविधानको धारा ११४ (२) ख मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ ।
प्रधामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने दुई अध्यक्षबीच विकसित घटनाक्रमबारे छलफल भएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड करीव एक घण्टा छलफलपछि बाहिरिएका थिए ।
यसैबीच बुधवारबाट शुरु भएको नेकपा सांसदहरुसँगको ओली र प्रचण्डको छलफल स्थगित भएको छ । अन्य तयारी गर्नुपर्ने भन्दै विहीबारको छलफल स्थगित भएको हो । बुधवार प्रदेश १, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा ओली मात्र बोलेका थिए । उनले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्यबारे सांसदहरुलाई बताएका थिए ।